I-R4 - Flexible $270/ngenyanga Igumbi laBucala
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguReasey
Ngaba unefuthe lokungaqiniseki kweshedyuli yeFlight ngenxa ye-Covid-19? Silapha ukunceda! Sinikezela ngokurhoxiswa okuguquguqukayo kunye nonikezelo lwexesha elide!
"Molo! Kuya kuba lixesha elimnandi ePhnom Penh!
Mna kunye no-Anti wam sibamba le ndlu isandula ukuyilwa eneBafu yaBucala kunye neBalcony enendawo egqibeleleyo yokujonga isixeko ngeenyawo ngerestyu, ibha yesibhakabhaka ephezulu edolophini, kunye nembonakalo yesixeko esikufutshane. Yeyona ndawo inamandla kwidolophu yasePhnom Penh. "
Eli gumbi lifakwe kakuhle kwaye lihonjisiwe linebhedi yesofa eyongezelelweyo, kunye negumbi lokuhlambela labucala kunye neBalcony, indawo yekhitshi ekwabelwana ngayo enezixhobo ezigcweleyo zasekhaya kunye netafile yokutyela.
Yi-10min nje ukuya kweyona ndawo iphakamileyo ye-Sky bar kwidolophu ebizwa ngokuba yi-Eclipse skybar. Uya kubona umbono omangalisayo ukusuka kumgangatho wama-23, kwaye akukho ntlawulo yokungena. Kufuneka nje ukuthenga isiselo. Zimbalwa iivenkile zekofu ezinomdla kwinyathelo nje elingephi kunye ne-eatery epholileyo, i-brunch, kunye nokutya kwendawo ngokunjalo. Ukuya kwindawo yaseRiverside kwaye uninzi lwezinto ezinomtsalane yi-10min nje ngeTuk Tuk kuba ibekwe embindini.
Umbuki zindwendwe ngu- Reasey
Siza kukushiya ubucala kodwa sifumaneka ngalo lonke ixesha ukuxhasa ngokuthumela imiyalezo kunye nokufowuna. Ngaphezulu koko, sinokucebisa ngesikhokelo sesixeko (ngokusekwe kumava ethu amakhulu ePhnom Penh) kwaye siyavuya ukucebisa ngokusekelwe kumdla wakho ngokunjalo. Sihamba ngokulula kwaye sisithethi esilungileyo sesiNgesi!
Siza kukushiya ubucala kodwa sifumaneka ngalo lonke ixesha ukuxhasa ngokuthumela imiyalezo kunye nokufowuna. Ngaphezulu koko, sinokucebisa ngesikhokelo sesixeko (ngokusekwe kumava…